Tanky GFS, dia azo zaraina ho faritra ho an'ny fitsaboana fanadiovana, mora kokoa sy haingam-pandeha kokoa, famolavolana mora kokoa. Drafitra fanamboarana tankina sy servisy GFF 1. Ny ekipa matihanina BSL tank dia hanome serivisy fanamboarana haingana rehefa nahazo ny fanontaniany, ny fenitra famolavolana drafitra ho an'ny AWWA D103-09, ary ny fitsipi-pifehezana vita amin'ny volavolan-drafitra iraisam-pirenena OSHA. 2. Miaraka amin'ny milina fanodinana mandroso sy ny tsipika famonoana enamel, ny fahafahantsika famokarana dia afaka hahatratra 160 takelaka / andro, ary azonao antoka ny ...
Vondron'ny fitsaboana fanjaitra
Ny tanky GFS, mora apetraka, dia afaka manao tsindraindray ireo faritra fitsaboana fitsaboana fanodinana samy hafa, hahatratrarana mahomby ny fikolokoloana fanodinana, ary fitambaran'ny fitsaboana. Famaritana sokajy mamaritra ny loko loko Maitso, fotsy, manga, ny loko dia azo arakaraka ny fangatahana Coating Thickness 0.25 - 0.40mm, coating roa Asidra ary alkalinity porofo Fototra PH: 3 - 11 takelaka manokana PH: 1 - 14 Fidirana 3450 N / cm Elastika mitovy amin'ny vy vy, manodidina ny 500 K ...
Tambajotra manokana, ho an'ny fitsaboana rano fako, miankina amin'ny takian'ny mpanjifa. Ny fampisarahana anelanelan'ny takelaka vy dia mora kokoa, miaraka amin'ny endriky ny takelaka vita amin'ny vy vy sy ny fanakonana ny tenany manokana, ary ny fitaovana fametahana manokana izay napetaka eo ambonin'ny takelaka roa, mahatratra ny fangatahana fametrahana haingana sy ny fanjifana kely. manarona ny takelaka vita amin'ny vy vita amin'ny enamel ny tanky dia afaka mitazona ny tsindry amin'ny 5kpa, ary ny tankina kosa dia azo atambatra miaraka amin'ny membrane metane storag ...
Ny ampahany lehibe amin'ny fitsaboana amin'ny rano, azafady hazavao mialoha ny mombamomba manokana sy ny refy manokana.